Tag: zụọ ahịa | Martech Zone
Tag: zụọ ahịa
Ndị na-ere ahịa: Ghọta àgwà ndị a dị mkpa maka ịzụta Britain
Tọzdee, Septemba 7, 2017 Tọzdee, Septemba 7, 2017 Douglas Karr
I huru ihe m mere ebe ahu? Onye Midwester a jiri nkọwa okwu nke Britain mee ihe karịa omume. Naanị m chọrọ igosi onye ọ bụla otú m si n'ụwa ma ọ bụ. Agabeghị m United Kingdom n'agbanyeghị agbụrụ ndị Scotland na nke Britain na mama m n'akụkụ ezinụlọ. (Lee nke ahụ? Emere ya ọzọ!) Ọ dị mma, ọchị (doh!), Nke a bụ ụfọdụ nnukwu ozi weghaara CM Brand. M kwenyere na nke a bụ
Inweta nkeonwe n'ime ụwa jupụta ebe niile
Tọzdee, Septemba 10, 2015 Tọzdee, Septemba 10, 2015 Venkat Viswanathan
N'ime oghere ire ere taa, ahaziri iche dị iche iche n'ọgụ iji dọta uche ndị ahịa. Ndị ụlọ ọrụ gafee ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịwepụta ahụmịhe echefuru echefu, ahụmịhe nke ndị ahịa iji wulite iguzosi ike n'ihe ma meziwanye ahịa - mana ọ dị mfe ikwu karịa eme. Creatmepụta ụdị ahụmịhe a chọrọ ngwaọrụ iji mụta banyere ndị ahịa gị, wulite mmekọrịta ma mara ụdị onyinye ha ga-enwe mmasị na, na mgbe. Ihe dịkwa mkpa bụ ịmara
Azụmaahịa na Ọdịnihu Ahịa Ahịa
Lọ ahịa na-agbanwe ngwa ngwa - ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị. Na omenala, ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa na-enwekarị oke uru na oke olu iji mepụta nsonaazụ azụmaahịa ha chọrọ iji lanarị. Anyị na-ahụ ntụgharị ngwa ngwa na mkpọsa ahịa n'oge a ebe teknụzụ na-eme ngwa ngwa na ịbawanye arụmọrụ. Rlọ ahịa ụlọ ahịa ndị na-anaghị erite uru na-anwụ… mana ndị na-ere ahịa na teknụzụ teknụzụ nwere ahịa ahụ. Mgbanwe igwe mmadụ, mgbanwe teknụzụ, yana ndị ahịa na-achọ ka ahaziri ndị ọzọ
Ihe kpatara azụmahịa gị ji kwesị ịdị njikere maka ezumike ahụ
Fraịdee, Nọvemba 22, 2013 Fraịdee, Nọvemba 22, 2013 Douglas Karr
Na Small Business Saturday na Black Friday na-abịa, ihe omuma a na-achọ ịkọwa ihe mere o ji dị mkpa iji nweta azụmahịa gị mobile-dịrị njikere maka ezumike ahụ. Ndị a bụ ihe isii iji nweta azụmahịa gị Mobile-Jikere maka Ememe si Tamara Weintraub, Onye njikwa ahịa ọdịnaya, ReachLocal. Ndị ahịa na-atụkwasị obi na Mobile Ha na-achọ Ozi Obodo Ha Na-eji Mobile Mobile Ha Chọrọ Ezumike Ezumike Ha Sholọ Ahịa na Ngwaọrụ Ọtụtụ. Ha Na-agụ Email na Mobile Mobile Marketing bụ
Ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ 5 na-achịkwa ezumike ahụ
Friday, December 7, 2012 Tọzdee, Disemba 6, 2012 Douglas Karr
Ndị folks na Maxymiser kesara ozi ọhụrụ ha, 5 Ndị na-azụ ahịa ọnlaịnụ na-achịkwa ezumike interwebs. Enwere m ekele dị ukwuu maka nke a n'ihi na ọtụtụ data dị n'ebe ahụ na-ezo aka na onye na-azụ ahịa… wee gbue data site na okike, afọ na ego. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ mkpali dị iche iche maka ndị mmadụ ịzụrụ. Maxymiser na-achọpụta mmadụ ise nwere mmetụta nke ndị na-azụ ahịa. Ha bụ dinta ịchụ nta, nke izizi n'ịntanetị